Iyo Fieldbus subsystem inogona kusvika muLinux Kernel 5.2 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Fieldbus subsystem inogona kusvika muLinux Kernel 5.2
Waive mavhiki mashoma apfuura vhezheni 5.0 yeLinux kernel yakaburitswa uye kunyangwe hazvo vhezheni iyi yakazoguma yawanikwa timu yekusimudzira haina kumira kushanda mune inotevera kernel shanduro.
Uye ndizvo izvozvo mune inotevera vhezheni yeLinux Kernel 5.xx nyowani subsystem «Fieldbus» inogona kuunzwa (kana munda webhasi), izvi zvinogona kutarisirwa kubva kuLinux kernel vhezheni 5.2. Inofanira kunyanya kubatsira maindasitiri marongero.
1 About Fieldbus
2 Kubatsira kunzvimbo dzemabhizimusi
2.1 Dzimwe shanduko dzeKernel 5.2
Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti izwi rekuti Fieldbus (kana munda webhasi) inoreva seti ye network protocols yakatsaurirwa ku chaiyo-nguva yakaparadzirwa kudzora kwema automated maindasitiri masisitimu Ivo vanowanzoda kugoverwa kutonga system uye nehurongwa hwakarongeka hweanodzora masisitimu kuti ashande.
Kazhinji, pamusoro peichi chinzvimbo chinzvimbo chevanhu-muchina (HMI) kubva kune iyo anoshanda anogona kuongorora kana kudzora system.
Pazasi yeketani yekudzora ndiyo inozivikanwa munda webus iyo inobatanidza PLCs kune zvikamu izvo zvinoita kuti basa riitwe (switch, macontactors, maactuator, sensors, mavhavha, magetsi ekunyaradza, magetsi emagetsi…).
Bhazi remumunda inokutendera kuti ubatanidze akasiyana masisitimu, zvikamu kana zviridzwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzeindasitiri.
Inoshanda muhurongwa hwetiweki iyo inobvumira cheni, nyeredzi, mhete, bazi uye topologies yemiti
Tsananguro yebusbus yanga iriko kwemakumi emakore uye ichi chikamu chedunhu chakagadzirwa kubvumidza akasiyana madhijitari chinjana data pamusoro pebazi remunda, ingave Profinet, FLNet, kana kumwe kuitiswa.
Iyo sisitimu yakagadzirirwa kupa iyo generic interface yeFarmbus. Ose ari maviri Linux kernel uye mushandisi nzvimbo yemidziyo.
Kubatsira kunzvimbo dzemabhizimusi
Profinet indasitiri yehunyanzvi chiyero yekutaurirana kwedata pamusoro pemaindasitiri Ethernet, yakagadzirirwa kuunganidza data uye michina yekudzora mune maindasitiri masystem, iine simba rakakosha mukuburitsa dhata pasi peyakaomarara nguva (yeiyo odhiyo ye1 ms kana pasi).
Kadhi repurinet pacharo Iyo yakabatana neiyo system kuburikidza neyeindasitiri bhazi inonzi 'anybus'.
Tsanga ye Linux 5.2 inofanira zvakare kuunza rutsigiro rweHMS Profinet makadhi rine basa rakakura kushandira maindasitiri otomatiki ayo akavakirwa paEthernet uye anogara achishandisa IEEE 802.3u: 100Mbit / s Fast Ethernet.
Iyi yekutaurirana standard purofiti inoshandisa TCP / IP uye ruzivo rwetekinoroji zviyero senge: webhu server: HTTP, yekutaurirana protocol: SMTP, kufambisa faira: FTP).
purofiti inobvumidzawo kushandiswa kweXML tekinoroji.
Iyo Linux Kernel fieldbus subsystem yakawana ongororo yeruzhinji mumwedzi ichangopfuura uye inonzi yakagadzirira kushandiswa neLinux 5.2, inotarisirwa kuve yekupedzisira muna Chikunguru 2019.
Dzimwe shanduko dzeKernel 5.2
Pamusoro pekukwanisa kuwana rubatsiro naFiadbus, Linux kernel 5.2 inotarisirwawo kusvika ine akasiyana AMDGPU inogadziridza.
Sezvo vagadziri ve AMD avo vari kutarisira giraidhi rutsigiro rutsigiro vatanga kuita rimwe rebasa rekuona mukati izvo zvinosanganisira kugadzira iro rinotenderera bhuti kodhi riwedzere generic uye mamwe magadziriso uye zvinowedzera.
Kune zvekare kune akati wandei emagetsi ePowerPlay / emagetsi ekugadzirisa, kusanganisira BACO (Bus Active, Chip Off) rutsigiro rwemakadhi ane Vega 12.
Pakupedzisira zvinotarisirwawo kuti Linux kernel 5.2 inosanganisira GCC 9 Live Patching sarudzo kubvira sekutsanangurwa nemumwe waanoshanda naye muchinyorwa chake (unogona kuishanyira mune iyi link)
Iyi compiler iyo inofanirwa kuburitswa mumavhiki anotevera. Iyi sarudzo yakasarudzika kubatsira kuburitsa mabhainari anoshanda nemazvo kuti Live Patching ishande.
Nekusvika kweLinux Kernel 5.2 iyi sarudzo ichashandiswa nekukasira, izvo zvinogona kukonzeresa kudonhedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Fieldbus subsystem inogona kusvika muLinux Kernel 5.2
Chipikiri chitsva muguva rayo: Xubuntu 19.04 inomira ichipa 32-bit rutsigiro